Luka Modric oo la warinayo inuu go’aansaday inuu isaga tago kooxdiisa Real Madrid… (Sidee wax u jiraan?) – Gool FM
Luka Modric oo la warinayo inuu go’aansaday inuu isaga tago kooxdiisa Real Madrid… (Sidee wax u jiraan?)
Haaruun May 7, 2019
(Madrid) 07 Maajo 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid, Luka Modric ayaa la soo warinayaa inuu go’aansaday inuu isaga tago garoonka S.Bernabeu.
Xiddiga xulka qaranka Croatia ayaa lix sanadood iyo bar ku qaatay kooxda reer Spain, laakiin waxa ay u muuqataa oo ay u badan tahay in 33-sano jirkaan uu doonayo inuu qaado tallaabo oo uu ku tagayo si uu u galo tartankan kale oo cusub.
Modric ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayay inuu u saxiixo kooxda Inter Milan xagaagii la soo dhaafay, laakiin Warsidaha Diario Gol ayaa daabacay in kubbad sameeyahan uu markale ku riixi doono kooxdiisa Los Blancos inuu baxo bilaha soo socda.
Warbixintu waxa ay sheegeysaa in Modric uu qilaafsan yahay oo uusan la dhacsanayn habka uu u shaqeeyo macallin Zinedine Zidane, kaasoo la sheegay inuu kaliya u tixgelinayo inuu yahay ciyaaryahan kooxda ka socda.
Modric ayaa weli sii wata inuu ka ciyaaro booska joogtada ah ee safka hore tababare Zidane, laakiin macallinka reer France ayaa la filayaa inuu dib u habeeyn ku sameeyo kooxda koowaad inta lagu guda jiro xagaagaan.
Xiddigaha kooxda Man United oo mushaar dhimis lagu sameyn doono kaddib markii ay seegeen inay ku dhammaystaan afarta sare ee Premier League
Goolhaye Iker Casillas oo Isbitaalka laga soo saaray kaddib markii… + SAWIRRO